China Penzura Sharpener fekitori uye vagadziri | SJJ
Penzura inorodza chishandiso chinokwanisa kuita mabasa acho nekukurumidza uye nemazvo. Ndeapi machira epenzura zvaunoda, iyo inorodza ichakubatsira iwe kuzviita. Penzura inorodza chakakosha chigadzirwa kune vana, epurasitiki inorodza nesimbi mashizha.
Penzura inorodza chishandiso chinokwanisa kuita mabasa acho nekukurumidza uye nemazvo. Ndeapi machira epenzura zvaunoda, iyo inorodza ichakubatsira iwe kuzviita. Penzura inorodza chakakosha chigadzirwa kune vana, epurasitiki inorodza nesimbi mashizha. Nemhando dzakasiyana-siyana dzepenzura dzinosarudza kusarudza kubva, zviri nyore kuwana sarudzo inokwana zvaunoda, chipo chikuru chekudzokera kumwaka wechikoro.
Penzura inorodza netsika yakavhenganiswa mavara inogona kusangana nezvako kwenguva yakareba / chero nguva.
Chitarisiko chemakatoni, vana vanozove nekufarira uye kufarira
Zvakatipoteredza zvine hushamwari mapurasitiki uye akachengeteka simbi mashizha anokutendera iwe kutenderedza penzura zvakanyanya.
Yakanaka pakukura; inogona kuiswa nyore nyore mune penzura kesi, homwe kana ruoko, gadzirisa yako inodiwa saizi.
Yakakwana kune vakuru nevana kuti vashandise muzvikoro, mumahofisi, mudzimba, mapurojekiti ehunyanzvi, nezvimwe. Kunakidzwa mibairo mushure mekuita kukuru kwekudzidzira.
Pashure: Notebook & Anonamira notsi
Zvadaro: Penzura Mabhokisi & Penzura Nyaya
Muvezi Penzura Sharpener